နမ်ဆန်ယာန် ဧရိယာတိုက်ပွဲမှ တပ်များ ဆုတ်ခွာသတင်း
ပင်မနေရာ ကြားဖြတ်သတင်း နမ်ဆန်ယာန် ဧရိယာတိုက်ပွဲမှ တပ်များ ဆုတ်ခွာသတင်း
နမ်ဆန်ယာန် ဧရိယာတိုက်ပွဲမှ တပ်များ ဆုတ်ခွာသတင်း	Saturday, 17 September 2011 16:41	User Rating: / 2
PoorBest ?????????? ???????????????? ??????
တစက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ နမ်ဆန်ယာန်ဧရိယာ တဝိုက်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ K.I.A နှင့် စစ်တပ်တို့အကြား တိုက်ပွဲမှာ စစ်တပ်ဘက်မှ အကျ အဆုံးများလာလို့ စစ်တပ်ဘက်မှ ဆုတ်ခွါသွားကြောင်း ကျေးရွာနှင့် နီးစပ်သူများထံမှ သတင်းရရှိပါတယ်။ စစ်တပ်တို့ နောက်ဆုတ်သွားရာတွင် မြေလှန်စနစ်ဖြင့် နမ်ဆန်ယာန် ကျေးရွာမှ အိမ် အလုံး (၂၀) ကိုလည်း စစ်သားများက မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း ၎င်း ရွာခံများမှ သတင်း စုံစမ်း သိရှိရပါတယ်။ အခုချန်မှာ အိမ်မီးရှို့ခံရသော ရွာသားများမှာ ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်နေ ကြကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။ ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲတွင် စစ်တပ်ဘက်မှ စစ်သားများ (၂၀) ဦး ကိုလည်း K.I.A တို့က အရှင်ဖမ်းဆီးမိထားကြောင်း K.I.A အရာရှိများ ထံမှ ဆက်လက်စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ ၎င်းအပြင် လက်နက် မျိုးစုံနှင့် ကျည်ဆံများကိုလည်း သိမ်းဆည်း ရရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
Last Updated ( Thursday, 04 April 2013 14:54 )